Umkhapheli: Iindaba zeSikolo sangoku
Izithuba zaBasebenzi zoHlelo zamva nje
Kufakwe kuyo Education by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 25, 2021
Iingcebiso zokuphucula iZakhono zakho zeMathematika-Abanye bethu ngamanani abantu abonwabileyo ukubala izinto, ukwenza i-spreadsheet ukulungiselela ubomi bethu, kwaye sihlala siqokelela amanani ngaphambi kokwenza izigqibo. Abanye bethu bawathiyile amanani kwaye senza konke esinako ukukhusela ukujongana nabo. Akukho nto igwenxa ngokungabi […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 23, 2021	• 0 Comments
Ukuqeshwa kwe-Standard Chartered Bank 2021: Eli phepha lenzelwe ngokusesikweni abafaki-zicelo abanomdla abanqwenela ukwazi ukuba i-Standard Chartered Bank izakuqesha nini abaphumeleleyo ngo-2021. iinkcukacha kweli phepha. I-Standard Chartered PLC yi […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 0 Comments
Faka isicelo ngoku kwi-ExxonMobil Graduate Recruitment 2021: Ngaba ujonge imisebenzi ye-ExxonMobil eNigeria 2021? Ngaba ungathanda ukusebenza e-ExxonMobil? Kananjalo awuyi kucinga ukuba sikukhokela ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokugaya imisebenzi ye-ExxonMobil eNigeria nangaphaya? Ukuba ewe, qhubeka ufunda. I-ExxonMobil Corporation yehlabathi […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 46 Comments
Ukuqeshwa kwakhona kwe-ExxonMobil 2021-Ngaba uyalazi i-ExxonMobil Recruitment 2021? Ukuba akukho, akukho sizathu sokwenza ialam. Eli nqaku liza kubonelela ngalo lonke ulwazi olubalulekileyo olifunayo kwi-ExxonMobil 2021 yokuqesha abantu. Oku kukwazisa uluntu ngokubanzi ukuba i-ExxonMobil Recruitment 2021 iqalile. Ndikhuthaza wonke umntu onomdla ukuba aqhubeke nokufunda […]
Ukuhlaziywa kwamapolisa eNigeria. Ngaba uphakathi kwabo bafaka isicelo sokugaywa kwamapolisa aseNigeria ekugayweni ngokutsha kwe2021? Ngaba uwuphosile umhla wakho wokuvavanywa ngenxa yezizathu ezibalulekileyo nezona zibalulekileyo kwaye ngoku ufuna uku […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 33 Comments
Ukuqeshwa kwe-DPR www.dpr.gov.ng 2021: Ifom yesicelo sokugaywa kwe-DPR 2021 ikhutshiwe! ISebe leMithombo yePetroleum liqalise ngempumelelo ukufakwa kwabafaki zicelo zeeseshoni ezingama-2021. Ngaba ufuna umsebenzi kumzi-mveliso wepetroleum, ukuba ewe, ungaphindi ufune kuba usephepheni. Eli phepha liza kukukhokela malunga nendlela yokwenza isicelo […]
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 1 Comment
IFomu yokwamkelwa kwabafundi kwi-UNIUYO SCE: IYunivesithi yase-Uyo (i-UNIUYO) ngoku ithengisa ifom yokwamkelwa kwesidanga sokuqala seDiploma, iMasters, ubuGqirha kunye neNkqubo yobuGcisa kwiseshoni yezifundo ze2020 / 2021. Qhubeka ufunde ukuze ubone ezinye iinkcukacha ezingezantsi. Izicelo ziyamenywa kubagqatswa abafanelekileyo abafanelekileyo ukuze bangeniswe kwiDiploma yokuthweswa isidanga, kwiiMasters, […]
I-JAMB yoPhando lweSlip yokuPhumela eyiSiphumo 2021 Jonga iinkcukacha apha
Kufakwe kuyo Uviwo, Iindaba zeJamb by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 10 Comments
Abaviwa abathathe inxaxheba kwi-2021 JAMB UTME bayaziswa ukuba ukuprinta kwesiphumo sokuqala seJAMB kuqalile kwiseshoni ye-2021/2022. qhubeka ufunda ukuze ufumane ezinye iinkcukacha ezingezantsi. Olu lwazi lolwabaviwa abathathe inxaxheba kuVavanyo lweMatriki oluManyeneyo lwe-2021 (i-UTME) kunye neminyaka eyadlulayo, eqhutywa nguKwamkelwa okuHlangeneyo
I-UNIABUJA Post UTME 2021/2022 Ifom yovavanyo, ukufaneleka kunye nomhla obekiweyo
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 55 Comments
I-UNIABUJA Post UTME 2021: iYunivesithi yase-Abuja, inqwenela ukwazisa bonke abanqwenela ukuba ngabagqatswa ukuba ifom yokwamkelwa kwe-UTME ye-2020/2021 ikhutshiwe. Abafakizicelo abanomdla kufuneka balandele isikhokelo esingezantsi kwisicelo esiphumeleleyo. I-UNIABUJA Post-UTME yokunqunyulwa kwamanqaku yi-180. Abaphathi beDyunivesithi yase-Abuja (UNIABUJA) bamema abagqatswa abafanelekileyo ukuba bazuze […]
I-UNIUYO Post UTME 2021/2022 Ifom yovavanyo, ukufaneleka kunye nokuhlaziywa komhla wokugqibela
Kufakwe kuyo Iindaba zeSikolo by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 22, 2021	• 200 Comments
I-UNIUYO Post UTME 2021: IYunivesithi yase-Uyo, i-UNIUYO inqwenela ukwazisa bonke abafuna ukuba yifom yokwamkelwa kwe-UTME ye-2020/2021 yeseshoni yezemfundo. Abafakizicelo abanomdla kufuneka balandele isikhokelo esingezantsi kwisicelo esiphumeleleyo. Ungasifaka njani isicelo se-UNIUYO Post UTME / ukungeniswa koVavanyo Abagqatswa abafanelekileyo kufuneka bahlawule isixa-mali esingabuyiswayo se […]